Nhungamiro Yakazara kune Indasitiri Yevanamukoti muLatin America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Nhungamiro Yakazara kune Indasitiri Yevanamukoti muLatin America
Argentina Breaking Nhau • Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • Colombia Breaking News • Ecuador Breaking Nhau • Guatemala Kuputsa Nhau • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
14 min kuverenga
Latin America yakaona kukura kukuru kwehukama nekusimudzira mukati memakore makumi mashanu apfuura, kuunza maindasitiri ese nemisika kune makumi maviri eupfumi uye gumi nemaviri anoenderana ayo anoumba dunhu rakasiyana. Nursing ndiyo imwe chikamu chakaita basa rakakosha mukufambiswa kwekurapwa mune ino chikamu chenyika. Vananyamukuta vanamukoti vanopa rubatsiro rwekusununguka kumadzimai akazvitakura nekuyamwisa. Nekudaro, iwo masango ekurapa mukiriniki uye nyamukuta ane hukama zvakanyanya uye vazhinji nyanzvi vanosarudza kuve mukoti-nyamukuta (CNM) anozivikanwa kuve nesarudzo yekuita ese ari maviri mabasa.
Nehurombo, kuitisa tsvakiridzo muLatin America indasitiri yekuyamwisa kunogona kukutungamira pasi mugomba retsuro yemishumo yepamutemo uye zvidzidzo zvisina gwara rakajeka kana mhedzisiro. Muchirongwa ichi chakareruka, tichaenda pamusoro pezvimwe zvinonzwisisika uye zvirevo zvinotsanangura mamiriro azvino eanamukoti nemawindowindasitiri muLatin America:
Zvikoro zvepamhepo zviri Kuwedzera Kuzivikanwa kune Vatsva Vanamukoti uye Vananyamukuta
Sezvazviri pachena nekutarisa chero mepu sataneti yakatariswa, kunze kune dzakawanda nzvimbo dzekumaruwa muLatin America. Mazhinji emataundi aya nemisha haana kana mayunivhesiti emuno kana madhigirii eukoti. Ehe, nevana vangangoita zviuru makumi matatu vanozvarwa muLatin America zuva rega rega, iyo inogara ichidikanwa yekudzidzira nyamukuta nedzidzo zvakare chimwe chinhu. Vadzidzi vazhinji vasingagare padhuze neyunivhesiti havana sarudzo asi kuenda ku online online midwifery chikoro kana chirongwa chekuyamwisa kuti uwane magwaro anodiwa kutanga mabasa avo.
Kune Zvikoro Zvinopfuura 1200 zveNursing muLatin America
Sekureva kweshumo rakaburitswa neWorld Health Organisation (WHO), zvikoro zvinodarika 1280 zvevanamukoti zvakaonekwa muLatin America neCaribbean yose. Izvo zvinogona kutaridzika kunge zvakawanda, asi kana iwe ukafunga chokwadi icho dunhu rine huwandu hwevanhu vanopfuura mamirioni mazana matanhatu nemakumi matatu emakumi ezviuru, zvinoreva kuti pane chirongwa chimwe chete chechikoro chevanamukoti pahafu yemiriyoni yevanhu. Zvikoro izvi zvinonyanya kuiswa mumadhorobha nemaguta makuru, uye semhedzisiro nzvimbo zhinji haina mukana wekupinda chikoro chemuno.
Mazhinji eDunhu Akatarisana Nekushomeka Kwevanamukoti
Kunyangwe paine dzimwe nyika muLatin America idzo dzine vanamukoti vakawanda kupfuura zvavari kudiwa, vazhinji vari kubata nezvakasiyana - kushomeka kwakapararira uko kunotarisirwa kupedza mamwe makore mashanu kusvika gumi. Kushaikwa kwambotaurwa kwezvikoro zvevanamukoti zvakazivikanwa munzvimbo zhinji zvinoita kuti zvisatarisike kuti vadzidzi vari munzvimbo idzodzo vafunge nezve mukana wekuve mukoti. Kunyangwe munyika umo dzidzo yakaitwa kuti iwanikwe nevagari mahara, kuchine mari nezvipingamupinyi pakuva mukoti kana nyamukuta.
Kurega Vacheche Boomers Chikamu cheDambudziko
Kana zvasvika pakunongedzera chinonyanya kukonzera kushomeka kwevanamukoti kuri kuramba kuripo, kuwedzera pamudyandigere kwechizvarwa chemucheche kunogona kuve kwakakunda kupfuura kusagadzikana kwemabhizimusi. Iri zera boka, rinotangira pamakore makumi mashanu nemashanu kusvika makumi mashanu neshanu, rinomiririra chikamu chiri kukura chevashandi vevanamukoti uye vevanyamukuta muLatin America. Sezvo vanhu ava vachienda pamudyandigere, fungu idzva revapedza kudzidza rinodiwa kutsiva ivo. Dambudziko nderekuti, mareti ekudzidzira haasi kurarama zvinoenderana nezvinodiwa nevanhu munzvimbo zhinji. Zvakare, kunyangwe dai waive nenhamba yakaenzana yevatsva vakapedza kudzidza vakagadzirira kuzadza shangu dzevanotora pamucheche boomers, zvinogona kuvaomera kuti vatore basa vasina ruzivo.
Mukoti Kutama Imwe Nyaya
Vanamukoti vazhinji uye vananyamukuta vanogara uye vanoshanda muLatin America vane zviroto zvekutamira kune dzimwe nyika dzakasimukira uko kwavanogona kuwana mihoro yepamusoro uye kubatsirwa neupfumi hwakasimba. Ichi chishuwo chinonzwisisika kuve nacho semunhu, asi padanho rakakura zvakashata zvekuyamwisa kweLatin America nekuti gore rega rega zviuru zvevanamukoti vanosarudza kutama, vachisiya mamwe maburi mukati akatarisana nekushomeka kwakatarisana nenyika dzakaita seChile neBolivia. Zvinosuruvarisa, hapana nzira chaiyo yekuti nyika idzi dzipe kurudziro kune avo vane hunyanzvi uye vane ruzivo vashandi kuti vagare, saka izvi zvicharamba zviri chinhu.
Gender Disparity Inotevera Yepasi Pose Trend
Chikamu chevanamukoti chinonyanya kugarwa nevakadzi pasi rese uye maitiro aya anoonekwawo muLatin America, uko ruzhinji rwevanamukoti vanhukadzi. Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti Latin America iri poto yekunyungudika kwetsika, nyika haisati yakwanisa kuzungunusa fungidziro yemagariro inoti varume vanofanirwa kuve vanachiremba uye vakadzi vanofanirwa kunge vari vanamukoti. Kubvisa uye kufamba kupfuura ichi chekare maonero kuchabatsira kudzora kusimba kwekushomeka kwevanamukoti pasirese.
Akakosha Nursing Stats yePeru
Zvakakodzera, isu tichatanga kuongorora kwedu kumatunhu akakodzera eko nyika yega yeLatin America nekutarisisa kweindasitiri yekuyamwisa yePeru. Nyika zhinji dzakatarisana nekushomeka kwevanamukoti, asi Peru inogona kunge ichikwanisa kuzadza maburi mune ino chikamu nekutanga kwa2020. Panguva iyoyo, vanofungidzirwa kuti 66% yevananyamukuta uye 74% yevanamukoti vachashandiswa. Kune vanosvika makumi maviri nevatatu vashandi vezvekurapa pavanhu zviuru gumi, zvichiita kuti Peru ive imwe yenyika dzeLatin America dzinoshanda zvakanyanya munzvimbo yehutano. Nekudaro, ruzhinji rwevanamukoti vePeruvia uye vananyamukuta vakapedza kudzidza vangangonetsekana kupinzwa basa mukati memakore maviri ekutanga ebasa ravo.
Akakosha Nursing Stats yeColombia
MuColombia, munongova nevanamukoti vatanhatu pavanhu zviuru gumi. Kunyangwe paine huwandu ihwohwo, avhareji yenyika inotarisirwa kurarama ingangoita makumi manomwe neshanu. Nehuwandu hwevanhu vangangoita mamirioni makumi mashanu, tinogona kuona kuti parizvino pane vanamukoti vanosvika makumi matatu vanoshandirwa muColumbia. Ivhareji yemubhadharo wemukoti muColombia ndeye 6 COP, iyo inoshanda kune ingangoita 10,000 COP paawa. Kuisa izvo muchiono, izvo zvinenge $ 79 USD paawa. Ehezve, nemubhadharo senge iwo, zvine musoro kuti vanamukoti veColombia vangave nezviroto zvekutamira kune imwe nyika iyo muhoro weawa uri 50x iyo huwandu.
Akakosha Nursing Stats yeBrazil
Brazil ine vanamukoti vana pavanhu zviuru gumi - nhamba yakaderera kwazvo yemetric iyi uye inoratidza kushomeka kuri pachena. Nehuwandu hwevanhu vangangoita mamirioni makumi maviri nemakumi mapfumbamwe, zvinoreva kuti kune vanamukoti vangangoita zviuru makumi masere vari kushanda muBrazil izvozvi. Nekudaro, sezvo iri nyika ine hombe yepasi ine nzvimbo zhinji dzekumaruwa, kune nzvimbo zhinji dzekumaruwa muBrazil uko kwakaoma kana kusakwanisika kuwana mukana wezvekurapwa kwehunyanzvi kana nyamukuta. Kunyangwe mumadhorobha makuru akaita seRio de Janeiro pane zviitiko zvavepo apo bazi rezvehutano renyika raida kuhaya vashandi vezvehutano nechimbichimbi nekuda kwematambudziko emari akasiya zvipatara nemakiriniki zvisina vashandi.
Akakosha Nursing Stats yeArgentina
Iine vanamukoti vana pavanhu chiuru chimwe, Argentina yakaverengerwa pane runyorwa rwenyika dzepamusoro makumi matatu nekushomeka kwakanyanya kwevanamukoti. Munyika ine vanhu vanopfuura mamirioni makumi mana nemana, kune vanamukoti vanosvika zviuru gumi nezvisere chete. Zvinonakidza kucherechedza kuti nyika ino inozivikanwa kuve neyakawandisa kuwanisa varapi, saka pane kushomeka kusinganzwisisike uye kwakasarudzika imomo mune izvo zvipatara zvine vanachiremba vanokwana asi vasina vanamukoti vakakwana. Sezvineiwo, kushomeka kwevanamukoti kuArgentina kwakapeta zvakapetwa kaviri kupfuura zvazvaive makumi maviri emakore apfuura, uye vaongorori vazhinji vanofungidzira kuti kuwedzera kuri kukonzerwa zvakanyanya nekuenda kune dzimwe nyika uko hunyanzvi hunowana mihoro yakakwira.
Akakosha Nursing Stats yeBolivia
Bolivia ine huwandu hwevanhu vangangoita mamirioni gumi nerimwe uye pane mukoti mumwe pavagari chiuru. Izvi zvinoreva kuti kune vanamukoti vanosvika chiuru chimwe chete munyika yese. Izvi zvinomiririra kumwe kushomeka kwakanyanya kwevanamukoti muLatin America, izvo hazvishamise paunoona kuti Bolivia yakagara yakarongedzwa seimwe yenyika dzine hurombo pasi rose. Kuoma kwehupfumi hwedunhu rino kunoita kuti ive nzvimbo isingafadzi kune vanamukoti vane ruzivo uye vananyamukuta kuti vagare nekuti chero nyika ipi zvayo inopa mubhadharo wakawanda pabasa rimwe chete.
Yakakosha Nursing Stats yeChile
Vanhu vazhinji vanoshamisika kuona kuti kune kushomeka kwevanamukoti muChile, sezvo zvichizivikanwa zvakanyanya kuti hurumende nguva pfupi yadarika yakaita kuti dzidzo iwanikwe pachena kune vese vagari. Nekudaro, nekuwanda kwakaita mikana yemabasa yekusarudza kubva, ukoti uye kusununguka kunova mabasa asingafadzi. Nyika ine huwandu hwevanhu vanodarika zviuru gumi nezvisere uye pane vanamukoti 18,000,000 chete pavanhu 0.145. Ndiyo imwe yakadzikira pamunhu mukoti munyika, uye kunze kwekunge basa raitwa sarudzo inokwezva kune vangangove vadzidzi, hazviite kuti kushomeka kugadziriswe chero nguva munguva pfupi iri kutevera.
Nursing Stats yeEcuador
Kushomeka kwevanamukoti muEcuador hakuna kushata sezvazviri mune dzimwe nyika dzeLatin America, ine vanamukoti vaviri pavanhu 2. Rudzi rwakaona kukura kwakakura muhuwandu hwevanamukoti vatsva hwakaonekwa pakati pemakore a1000 na1998, ichiona kuwedzera kubva pa2008 / 5 kusvika kune anopfuura 10,000 / 18 panguva iyoyo. Nekudaro, Ecuador ine yakakwira kwazvo nhamba yevanosiya chikoro chesekondari uye vashoma chete muzana muzana yevagari vanozonyatso kuenda kuyunivhesiti, saka zvinoita sekunge zvisingaite kuti chikamu chevanamukoti chizoenderera mberi nekukwira kwadzo kupfuura fungu rekurega vana vacheche vachasiya vashandi pakati pe10,000-2020.
Nursing Stats yeGuatemala
Guatemala imwe nzvimbo yeLatin America iyo ine yakaderera kwazvo nhamba yevanamukoti pamunhu mumwe chete pa0.864 pavanhu chiuru chimwe chete. Iine huwandu hwevanhu vanopfuura zviuru gumi nezvina uye hupfumi hune mukaha wakakura kwazvo wehupfumi pakati pevagari vemo varombo uye vakapfuma, Guatemala iri mukuda kwakanyanya kwevanamukoti vatsva uye vananyamukuta. Kunyangwe iine hupfumi hukuru muCentral America, ino inyika inogarwa nevanhu vanodarika makumi matanhatu muzana muhurombo. Nepo dzidzo iri yemahara munyika ino, izvo zvinodiwa kuti upedze chikoro zvichiri kudhura kune wepakati mugari, zvichigadzira chimwe chipingamupinyi chevangangove vadzidzi vekurapa.
Matanho echiremba eMexico
Hazvingaite zvine musoro kuvhara indasitiri yevanamukoti yeLatin America tisingataure nezve mamiriro azvino muMexico. Hurumende yenyika nguva pfupi yadarika yakazivisa kuti vamwe vanamukoti mazana maviri nemakumi mashanu nemashanu vanodiwa kuitira kuzadzisa gwara reWorld Health Organisation rekuva nevanamukoti vatanhatu pavanhu zviuru zana. Parizvino, Mexico inongova nevanamukoti vana pavanhu zviuru zana, iine vanamukoti vanosvika hafu yemiriyoni vanoshandira huwandu hwevanhu vanopfuura mamirioni gumi nemaviri. Idzo nzvimbo dzine kushomeka kwakanyanya kwekukoti muMexico dzinosanganisira Veracruz, Michoacan, Queratero, uye Puebla.
Nursing Stats yeCaribbean
Chekupedzisira, sezvo maCaribbean neLatin America achiwanzobatanidzwa pamwechete munzvimbo imwechete, zvakaringana kukurukura matanho enharaunda iyi zvakare. Kune vanamukoti vangangoita 1.25 pavanhu chiuru chimwe vanogara muCaribbean inotaura Chirungu. Izvi zvinoreva kuti vanamukoti vanosvika zviuru zvisere vanoshanda munzvimbo ino. Kubva muna 1,000, chisingaenzaniswi chinodiwa chevanamukoti muCaribbean chaive 8,000. Pakazosvika 2006, nhamba iyoyo inotarisirwa kusvika zviuru gumi. Makore mashanu ega ega, vanamukoti zviuru zviviri vanosiya maCaribbean kuenda kune nyika dzinobhadhara zvakanyanya. Iyi nhamba inoratidza dambudziko rakajairika iro nyika zhinji dzeLatin America dzava nadzo - kusakwanisa kuchengetedza vashandi vavo vekurapa vanonyanya kukosha kuti vatame.
Nei Vadzidzi Vachisarudza Pamhepo Zvirongwa Pane Zvikoro Zvepamhepo
Nekuverenga huwandu hwepamusoro uye nzwisiso, iwe unotanga kuona yakajeka mufananidzo wedunhu uko kutsvaga basa semukoti hakuwanzoite senge inobatsira basa sarudzo. Vadzidzi vazhinji vari kusarudza nzira yepamhepo nekuti inovapa kugona kubvumidzwa neyunivhesiti yekune dzimwe nyika. Zvitupa zvinopihwa nezvikoro izvo zvakavakirwa munyika dzakasimukira zvinowanzo sarudzwa.
Dhigirii kubva kuUS-based kana European yunivhesiti inogona kutaridzika zvirinani pane ramangwana kunyorera basa pane degree revanamukoti rakawanikwa kubva kuyunivhesiti diki kana isina kujeka iri muCentral kana South America. Icho chinhu chega chinowanzo kukurudzira vadzidzi vane chinzvimbo kuti vatevedze dzidzo kunze kwenyika kana kuburikidza nepamhepo nzvimbo yekufunda institution. Mukuvhara, epamhepo degree zvirongwa zvinoita kunge zvinopa mukurumbira kupfuura zvikoro zvekuLatin America, izvo zvinoshandura kune mamwe mafambiro uye mikana yekufambira mberi kwebasa.
Ipa e-YeVashanyi Visa muIndia Zvino Inokurudzira Aimbove IATO ...
Vanhu 59 vakafa, vanopfuura 1000 vasipo senjodzi ...
CDC yakaburitsa meseji inokurumidza kune chero weAmerica ...
Kuronga Carnival Cruise kubva kuFlorida Port Miami mu ...